Fanafihana Hoaxes sy sainam-pirenena sandoka: amin'ny alàlan'ny tesis, fanoherana ny tesis sy synt synt to New World Order | Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Hoaxes sy ny fanafihana sandoka sandoka: amin'ny alalan'ity fizarana ity, fanoherana ny fanadihadiana sy ny fampidirana any amin'ny World World Order
Toa sarotra kokoa ny mahatakatra ny fomba nilalaovana ilay lalao teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ao amin'ny tontolon'ny toerana misy ireo tonga mba hanome voninahitra an'i Donald Trump sy ireo hafa izay mahita an'i Putin ho ilay lehilahy miady amin'ny New World Order. Ireo tranonkala farany dia matetika vonona ny hiantso fanafihan'ny mpampihorohoro ny sainam-piraisana, kanefa tsy hitanao mihitsy ny nanazavany azy ireo fa mety ho fihomehezana tanteraka ihany koa ny hetsika iray. Raha toa ka misy ny fanararaotana amin'ny fisian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro, indraindray dia midika fa ny roa tonta dia nahatsikaritra fa tsy nisy ny fanafihana, fa nokendrena kosa. Mazava ho azy fa sarotra amin'ny famaritana ny fahafahana manao fanadihadiana tsara avy amin'ny fampihetsiketsehana ny vaovao ao amin'ny aterineto ary hahafantarana ny zava-misy marina, saingy echt Amin'ny toe-javatra maro, ny fisainana manakiana dia tsy hita ao anatin'ny sain'olombelona intsony, izay midika fa matetika ny olona dia miala amin'ny tantara efa nomanina mialoha ny haino aman-jery na avy amin'ny tranokalam-baovao amin'ny safidiny.
Andao hoheverina ny toe-javatra an-tsaina izay, ohatra, ny fanafihana entona poizina tato ho ato tany amin'ny faritany Idlib ao Idlib ...